Julian Assange haazoendeswa kuUnited States | Linux Vakapindwa muropa
Julian Assange haazoendeswa kuUnited States
Nezuro, Ndira 4, Mutongi weBritish akatonga kuti muvambi weWikiLeaksJulian Assange haigone kuendeswa kuUnited States yekuwana uye kutsikisa zvakavanzika magwaro ehurumende yeUS muna 2010.
Mutongi wedunhu Vanessa Baraitser anotenda izvozvo mamiriro epfungwa emumhan'ari haapindirani nekuwedzeredzwa.
Nekudaro, mushure mekuburitsa zvakakosha zvemutongo wake, mutongi akatanga nekubvisa kuzvidzivirira kwechikwata chezvemitemo chaJulian Assange. Muchokwadi, Baraistser pakutanga yakaramba yakawanda yemakakatanwa akaunzwa neiyo WikiLeaks yekutanga dziviriro. Nekudaro, ainyanya kugamuchira kupokana kune hukama nehutano hwake.
Panguva yekutongwa, nyanzvi dzakasiyana siyana dzakaongorora Julian Assange anga aona kusagadzikana kukuru kwepfungwa uye akagumisa kuti akatambura kunyanya nekushushikana kwakanyanya, kunyanya pakuronga kuzviuraya mutirongo. Naizvozvo, akataura kuti rusununguko rwekutaura harwutadzise kuendeswa kweAustralia.
Kubva chitubu 2019, Julian Assange akavharirwa mujeri reBelmarsh, London, uko kwaunofungidzirwa semusungwa ari panjodzi yekuzviuraya. "Ndine chokwadi chekuti njodzi yekuti VaAsange vazviuraye yakakosha," akadaro mutongi nezuro.
Achibvuma zvakawanikwa nenyanzvi yezvokurapa Muzvinafundo Michael Kopelman, Emeritus Professor weNeuropsychiatry paKing's College London, Mutongi Baraitser akaenderera mberi achiti: “Kubva pane ruzivo rwese rwaanarwo, anotenda kuti Julian ari panjodzi yekuzviuraya Assange akakwirira kwazvo kana kutorwa kwake kuri pedyo . "Aive maonero akanyatsoziva, akatsigirwa neuchapupu uye akatsanangurwa mumishumo miviri yakadzama."
WikiLeaks yakaburitsa, pakati pezvimwe zvinhu, kota yemiriyoni yemamiriri eU.S. muzvinyorwa zvakajeka. Zvagara zvichitaurwa kuti aya aive nemazita asina kuferefetwa evasori veAmerica uye vazivisi munyika dzine hukasha, uye kuti kumwe kuedza kwakaitwa kuyambira United States isati yatsikiswa.
Hurumende yeUnited States ichakwidza mutongo uyu, zvinoreva kuti nyaya yacho ichaenda kuDare Repamusoro reEngland neWales. Nharo dzepamutemo dzinogona kunge dzakanangana nemamiriro ekuvharirwa muUnited States, pamberi uye mushure mekuyedzwa. Julian Assange akatarisana nemutongo wemakore 170 mutirongo muUnited States.
Kunze kwekutora nekuburitsa magwaro akavanzika, ari kupomerwa mhosva yekuba chibharo nekubatsira kwaanobva kwaakawana kuwana magwaro. Muchuchisi weAmerica anopomerawo Julian Assange mhosva yekuisa njodzi vamwe vazivisi vemauto eUS nekuburitsa pachena hunhu hwake, izvo zvakarambwa neAustralia nechikwata chake.
Pakati pekupomerwa kweAmerica ibasa reWikiLeaks muna 2010 na2011, apo sangano rakaburitsa magwaro epachivande anojekesa zviitiko zvemauto eAmerica muIraq, muAfghanistan, asi zvakare zvidimbu zvejeri reGuantanamo kana makumi zviuru zvemitambo yekukurukurirana.
Uye ndezvekuti mushure memutongo, vezvematongerwo enyika vakati nemasangano vakagamuchira nhau, kunyangwe vamwe vakaratidza kushushikana kuti mutongo wakapihwa nekuda kwehutano zvikonzero:
Mutungamiri weMexico, Andres Manuel Lopez Obrador akati akange apairaira kuna chancellor wako okupa hupoteri kune vezvematongerwo enyika kuna Julian Assange, ndiani "mutori wenhau uye anokodzera mukana";
Aimbove Mutungamiriri wevashandi veUKJeremy Corbyn akadana chiyero "nhau dzakanaka," asi akati "zvinotyisa kuti mutongi agamuchire nharo dzehurumende yeUnited States dzinotyisidzira rusununguko rwekutaura uye rusununguko rwekuburitsa."
Amnesty International yakagamuchira danho iri, asi akashoropodza UK kuti "* ichipinda muchiitiko ichi zvine chekuita nezvematongerwo enyika pakarairwa neUS uye nekupokana nerusununguko rwevezvenhau nerusununguko rwevezvenhau."
Vakuru veUS vane mazuva gumi nemana kubva pazuva remutongo wekukwirira. Zvichakadaro, mushure mekuziviswa kwechisarudzo, Assange akadzokera mutirongo: Magweta ake anofanira kuendesa chikumbiro chebheyili, chinozotarisirwa neChitatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Julian Assange haazoendeswa kuUnited States
Kurambidzwa kweQT kwatotanga uye Qt 5.15 kodhi yekodhi haichakwanisike
Google yaizove ichidzivirira kugadzirisa ayo maapplication kuti isape ruzivo nezve data yainotora